အုတ်လုပ်သားနှင့်လုပ်ကွက်လုပ်သားများအတွက်လုပ်ငန်းခွင်တွင်းအလုပ်လုပ်ခြင်း - အကယ်၍ သင်အလုပ်တစ်ခုရှာနေလျှင် [Genvers]
အုတ် / ပိတ်ဆို့ခြင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင် ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း၊
အုတ် / ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဆောက်လုပ်ရေးနေရာစုဆောင်းမှု
အုတ် / ပိတ်ထားသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သတင်းအချက်အလက်
[စာရင်း ၉ ခု] အုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားစုဆောင်းခြင်း / အချိန်ပိုင်းအလုပ်ခေါ်ယူခြင်း။ဆောက်လုပ်ရေး၊ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများတွင်အဓိကထားသောအလုပ်အမျိုးမျိုးကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။သင်၏လက်၌အလုပ်တစ်ခုရပြီးသင်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုကိုတိုးပွားစေပါ။Shinken Co. , Ltd. နှင့် Satake Kogyo Co. , Ltd. စသည့်အုတ်နှင့်ပိတ်ဆို့အလုပ်သမားများအတွက်အလုပ်ခွင်တွင်း ၀ င်ရောက်မှုဆိုင်ရာအလုပ်များအကြောင်းရေးသားထားသည်။
[Asaka City] ပုံသဏ္workာန်လက်သမားအရေးပေါ်လူသစ်စုဆောင်းခြင်း■အလုပ်အားလပ်ချိန်မရှိပါ
[Kawasaki-ku, Kawasaki] ကျောက်ခင်းရှေ့တွင်အလုပ်သမားများကိုခေါ်ယူခြင်း "AC သုံးအစားအစာနှင့်အတူသီးသန့်အဆောင်"
အုတ် / ပိတ်ထားသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ရှာဖွေမှုရလဒ်များ
7 ကိစ္စအုတ်ခဲနှင့်လုပ်သားများအတွက်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ရှိသည်။ (၁-၃၀)
Shinken Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
တစ်လ ၈ ရက်အားလပ်ရက်★ကုမ္ပဏီသို့ဝင်ရောက်ရန်ကြိုဆိုပါ၏★ညကျောင်းသားအထောက်အပံ့!ကျူရှင်နှင့်အခြားအသုံးစရိတ်များအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးအထောက်အပံ့★နေ့စဉ်လစာမည်မျှပေးရမည်။ ယန်း ၁၀၀၀၀ ~ အသေးစိတ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ လခပေးသော ဦး စားပေးကုသမှု★★အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်အကိုင်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အထောက်အပံ့!သင်သည်သင်၏အလုပ်နှင့်လူနေမှုပုံစံစသည့်နယ်ပယ်သစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါကစိတ်မပူပါနှင့်။၎င်းသည်★ကိုကူညီပေးပါလိမ့်မည်
ပြင်ပ / ပြင်ပဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ
■ [ကုမ္ပဏီ] ပြင်ပဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ (အတွေ့အကြုံမရှိ၊ အတွေ့အကြုံရှိသူများကို ဦး စားပေးကုသမှု) နေ့စဉ်လစာ ၁၀,၀၀၀ ယန်း ~ (အတွေ့အကြုံရှိသောကော်မတီ၏အင်တာဗျူး) ☆အတွေ့အကြုံ၊ စွမ်းရည်၊
တိုကျိုနှင့် Saitama စီရင်စု
Satake Kogyo Co. , Ltd. အတွက်အလုပ်များဟုတ်လား
Satakegumi Co. , Ltd. ၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဟုတ်လား
★အရည်အချင်းပြည့်မီစေရန်ကုမ္ပဏီမှသင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ [နေ့ခင်းဘက်အလုပ်နှင့်အချိန်ပိုမရှိတော့ပါ။ ★သီးသန့်ဖြည့်ဆည်းခြင်း! ] ဒါဟာအပျော်ဆုံးကုမ္ပဏီပါ။
ပြင်ပဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ
အတွေ့အကြုံရှိသူတစ်ရက်နေ့စဉ်လစာ ၁၃၀၀၀ ယန်းမှ ၁၈၀၀၀ ယန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူတစ် ဦး နေ့စဉ်လစာ ၁၀,၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်။ သင်သည်နေ့စဉ်လစာစနစ်သို့မဟုတ်လစဉ်လစာစနစ်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
Saitama စီရင်စု၊ Saitama City Suburbs Office မှ ၁ နာရီအတွင်းဆိုက်ဒ်
Sansei Jiankang ဂျော့ဘ်ဟုတ်လား
လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ၀ န်ထမ်းများခန့်အပ်ခြင်း။တစ် ဦး တည်းသောနှင့်အဆင်ပြေအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်!အစပြုသူများကိုကြိုဆိုသည်။အရည်အချင်းပြည့်မှီသောဝယ်ယူမှုစနစ်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အရန်သင့်သိမ်းဆည်းခြင်း!
မြို့ပြအလုပ်ခွင်အလုပ်သမား ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဆိုက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးမ ၀ င်ပါ
လစဉ်လစာယန်း ၃၀၀,၀၀၀ မှ ၅၀၀,၀၀၀ ယန်း (အတွေ့အကြုံ၊ စွမ်းရည်နှင့်အလုပ်သဘောထားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း) အခြားထောက်ပံ့ကြေးများစွာရှိသည် (အင်တာဗျူးသည့်အချိန်တွင်အသေးစိတ်ရှင်းပြလိမ့်မည်) ★ဆိုဒ်သို့မည်သည့်အရာဖြင့်ပါဝင်သည်ကို ...
Chiba စီရင်စု၊ Kanto ,ရိယာ၊ Nagano စီရင်စု
Garden Assist Co. , Ltd.
Landscaping / Sales
လက်မှုပညာရှင်၏နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၄၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ (၈း၀၀ မှ ၁၇း၀၀) အလုပ်သင်နေ့စဉ်လစာယန်း ၉၀၀၀ - ၁၃၀၀၀ ယန်း (၈း၀၀ မှ ၁၇း၀၀) ကွင်းဆင်းကြီးကြပ်သူလစဉ်လစာယန်း ၂၅၀၀၀၀ - (...
အဓိကအားဖြင့် Kasukabe City နှင့် Kitamoto City, Saitama Prefecture Saitama City, Kawagoe City, Tokorozawa City စသည်တို့ဖြစ်သည်။ Saitama Prefecture 1706-8 Fujitsuka, Kasukabe City, Saitama Prefecture 048 -...
Garden Assist Co. , Ltd. အလုပ်များဟုတ်လား
အပြည့်အဝလူမှုဖူလုံရေးအာမခံတပ်ဆင်ထားသည်!သငျသညျစိတျ၏ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်!၎င်းသည်လူလတ်ပိုင်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများတက်ကြွသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်နိုင်သည့်အလုပ်ခွင်ဖြစ်သည်!အတွေ့အကြုံရှိသောလူများကို ဦး စားပေးကုသမှုပေးလိမ့်မည်။အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုသည်။
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် Landscaping ၀ န်ထမ်းများ
အတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး ၏နေ့စဉ်လစာ ၁၃၀၀၀ ယန်း ~ ၁၈၀၀၀ ယန်းအတွေ့အကြုံရှိသူနေ့စဉ်လစာ ၈၀၀၀ ယန်း ~ * စွမ်းရည်အားဖြင့် ဦး စားပေးကုသမှုအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု
မြို့တော်areaရိယာ၏ဆင်ခြေဖုံးများ (တိုကျို၊ Saitama၊ Kanagawa၊ Chiba၊ Ibaraki)၊ Toda City၊ Saitama စီရင်စု၏စီရင်စု [Saitama Store] 335-0022-2 Uedoda, Toda City, Saitama Prefecture 7-14 Lion ...
Provence Co. , Ltd. တွင်အလုပ်များဟုတ်လား
အဆောက်အအုံ၊ မီးဖို၊ အနိမ့်ဆင့်၊ လမ်းဘေးစသဖြင့်နံရံနှင့်နံရံပေါ်ရှိတောင်းဆိုမှု၊ အသွင်အပြင်နှင့်သဘောသဘာဝအရရွေးချယ်ထားသည့်အုတ်များကို "အုတ်လုပ်သား" ကအပြီးသတ်ပြုလုပ်သည်။အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်သူတို့သည်တာလိုင်များကဲ့သို့ဆောက်လုပ်ရေးနည်းစနစ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ဘေးချင်းယှဉ်။ အလုပ်လုပ်ကြသည်။အဆိုပါလုပ်ငန်းသည်ခွဲဝေသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း stacking cleanရိယာကိုရှင်းလင်းရန်, မော်တာတင်နှင့် stack ရန်ဖြစ်ပါသည်။ "Block work" သည်အသေးစိတ်ပုံစံပေါ် အခြေခံ၍ အားဖြည့်အရက်ဆိုင်များနှင့်အင်္ဂတေများကို အသုံးပြု၍ လုပ်ကွက်များကိုစုစည်းပြီးနံရံများ၊ partitions နှင့်နံရံများကိုတည်ဆောက်သည်။အသွင်အပြင်နှင့်သဘောသဘာဝကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ကွက်အများအပြားရှိပါတယ်။အထူးအရည်အချင်းများမလိုအပ်ပါ။ သို့သော်“ ဆောက်လုပ်ရေးကွန်ကရစ်ဆောက်လုပ်သူ” အနေဖြင့်သီးသန့်အရည်အချင်းရှိခြင်းသည်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နည်းပညာအထောက်အထားတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးဝင်ပါသည်။အကယ်၍ သင်သည်အမျိုးသားအဆင့်အရည်အချင်းပြည့်မှီသော "block construction technician" ဖြစ်လာရန်ရည်ရွယ်ပါကအလုပ်၏ကျယ်ပြန့်လာလိမ့်မည်။
ဆိုင်တာမာ၊ တိုဒါ၊ ကဝါဂူချီ (၁၀)
Teshima, Shinjuku, Shibuya, Suginami (2)
Kuki, Kumagai, Honjo (2)
ကဝါဂိုး၊ တိုရိုရိုဝါဝါ၊ ဆရာယာ (၉)
နာရီတာ၊ အင်းဇိုင်း၊ ခရှရှီ (၂)
အလုပ်သင် / အတွေ့အကြုံမရှိသောကြိုဆိုခြင်း (7)
လူမှုဖူလုံရေးအပြည့်အ ၀ တပ်ဆင်ထားသည် (6)
သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေမှာ "အုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအလုပ်ဒါဟာ "ဖြစ်ပါတယ်။